Ny reny no mahatonga ny ankizy harani-tsaina !
Tsy maintsy mamindra ampahan-toetra na endrika ivelany amin-janany ny ray sy ny reny : endrika, sokajin-drà, fihetsika… satria avy amin’ny foto-tarazo ireny.
Indraindray, mahery kokoa ny ràn’i dada, indraindray ny an’ny reny. Ahoana kosa ny mahakasika ny fahiratan-tsaina ? Iza no tena mamindra izany amin’ireo ankizy ?
Avy amin’ny « chromosomes » X
Namoaka lahatsoratra momba ny faharanitan-tsaina ny gazety boky siantifika Psychology Post. Nivoitra tamin’izany fa ny reny no mamindra ny fahiratan-tsaina sy ny fiasan’ny atidoha amin’ny zanaka. Ny tarazo mitondra ny fahiratan-tsaina mantsy dia ny « chromosomes » X, izay avo roa heny ny isany any amin’ny vehivavy, raha mihoatra amin’ny an’ny lehilahy. Manana taha avo roa heny hampita izany amin’ny zanany izany ny vehivavy. Raha mampita ity tarazo X ity amin-janany aza ny lehilahy dia tsy miasa akory izany, araka ny nambaran’ity lahatsoratra ity. Etsy andaniny, voalaza koa fa misy akony be amin’ny fivoaran’ny atidoha ny fifandraisam-po misy eo amin’ny reny sy ny zanany, izay somary lalina kokoa raha mihoatra amin’izay misy eo amin’ny ray sy ny zanaka.
Mizara mazava tsara kosa
Araka ity lahatsoratra ity ihany dia tsy ny foto-tarazon’ny reny ihany akory no mamaritra ny atidohan’ny ankizy. Samy mampita ny tarazony avokoa ny ray sy ny reny, fa ny endriny no samy hafa. Ny reny no mampita ny fahaiza-miteny, ny fitadidiana, ny fomba fisainana ary ny fahiratan-tsaina. Ny ray kosa no mampita ny fomba fihetsika, arakaraky ny zava-mitranga sy ny toetra, ny fihetseham-po, ny fahazotoan-komana, ny fomba fiaina (respiration) ary ny faniriana.
Ny hevitry ny matihanina :
Ramatoa Koloina Andrianilaina, psychologue clinicienne : Mirakitra zavatra maro ny atao hoe fahaizana : ny fitadidiana, ny fifantohana, ny fomba firesaka, ny fandresen-dahatra. Maro ny fikarohana, tao aorian’io voalaza ao anaty lahatsoratra io, miezaka mandalina ny foto-kevitra hoe : avy amin’iza amin’ireo ray aman-dreny ny fahaizan’ny zanany. Hita anefa fa tsy io foto-tarazo X io ihany no afaka mitondra ny fahaizana, fa misy foto-tarazo hafa maro ihany koa. Ampahany ihany no toerana tazonin’io foto-kevitra io, satria manan-danja lehibe eo amin’ny fivoarana ara-tsain'ny zaza ny sakafo haniny, ny manodidina azy, ny fampianarana azony, ny fitaizana azy ary ny fomba fampitana hevitra sy famelana azy haneno hevitra.
Ramatoa Kolo Randriamananana, "conseillère en éducation et rééducation spécialisée en psychologie" : Mila mitandrina isika amin’ny karazam-panontaniana toy itony hoe : « avy amin’ny ray sa ny reny ? » satria mety hitarika fanavakavahana sy fanindrahindrana ny maha-ambony ny vavy na ny lahy izany. Eo amin’ny sehatry ny fanabeazana, ny zava-dehibe mahasoa ny zanaka dia ny fahafantarana fa isika olombelona tsirairay avy, na lahy na vavy, dia samy hafa avokoa sady tokana (unique), kanefa mitovy amin’ny lafiny maha-olona : samy manana zo, manam-panahy, manana fihetseham-po, ary samy manana ny maha-izy azy ao anatin’izany fahasamihafana izany. Tsaratsara kokoa ngamba raha hapetraka toy izao ny fanontaniana : « ahoana no mampivelatra ny fahiratan-tsain’ny ankizy ?».
Marina fa anisan’ny mandrafitra ny maha-izy ny olombelona ny foto-tarazo (gène) nolovaina tamin’ny ray aman-dreny. Taorian’io fikarohana navoakan’ny Psychology Post io dia efa nisy valim-pikarohana vaovao nanambara fa samy mandray anjara amin’ny fandrafetana ny fahiratan-tsain’ny zaza ny fototarazo avy amin’ny reny sy ny ray. Mbola mila fikarohana lalina sy maro hafa vao azo amarinina ny hoe karazana fahiratan-tsaina inona no mety holovaina avy amin’ny ray, ary karazany inona no mety holovaina avy amin’ny reny. Ny fahiratan-tsaina rahateo dia tsy voafetra amin’ny fahaizana fotsiny, fa misy lafiny maro.
Ny fikarohana ankehitriny dia milaza fa 20% hatramin’ny 40% ihany no anjara birikin’ny foto-tarazo amin’ny fandrafetana ny sain’ny olombelona iray, fa ny tontolo iainana sy ivoaran’ny zaza dia misy fiantraikany lehibe ihany koa, na amin’ny toetrany, na amin’ny fahiratan-tsainy. Tsy tokony atao ambanin-javatra, noho izany ny fanomezana tontolo mahasoa ny zaza, mba hampivelatra azy tsara, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-toetra, na ara-panahy. Tsy ny fitoviany amin’ny rainy na ny reniny no hampivelatra azy, fa ny fanajana sy fampiroboroboana ny maha-tokana azy sy ny maha-izy azy.